Col Cabdullahi Yusuf oo isku dayay in uu weeciyo Macaawino Talyaaniga ugu deeqay dalka Soomaaliya
Buluugleey Jun 18, 2005
Col. C/llaahi Yuusuf ayaa is hortaagay deeq mucaawino ah oo dowladda Talyaaniga ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed. Deeqdan oo uu sido Markabka ku xaniban Dekedda Mombassa ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay gaareyso 9500 Tan oo u badan raashin.
Warkan oo aan ka soo xiganay idaacadda Radio Shabeelle ayaa sheegaya in Col Cabdullahi Yusuf la xiriiray saraakiisha Talyaaniga isagoo weydiistay in markabkan sida macaawinada laga dejiyo dekeda magaalada Boosaaso. Warku wuxuu intaa ku darayaa in Col Cadullahi uu qorsheeystay in deeqdaasi marnaba laga dejinin dekedda Ceel macaan ee ku taal magaala Muqdisho magaala madaxda Soomaaliya. Haseyeeshee, dowlada Talyaaniga ayaa lagu soo waramayaa markii ay ogaatay qorshahas uu Col Cabdullahi Yusuf watay in ay ku gacan seyrtay iyadoo saraakiisha Talyaanigu sheegeen in haddii qorshahii ay ugu soo talo gashay ay dowladda KMG fulin weyso ay ku wareejin doonto hay’adda Cunada Aduunka ee Qaramada Midoobay WFP oo gaarsiin doonta magaalada Muqdisho si cadalad ahna loo qeybin doono.
Haddabo, waxaa waddamada deeqda bixiya ka go’an inay gacan weyn ka geystaan dibudhiska dalka Soomaaliya. Sikastaba ha ahaatee, Col Cabdullahi Yusuf ayaa dhabarjab weyn ku ah diidmada uu kala kulmay Talyaaniga, waxayna u muuqataa mid sii daciifineyso kalsoonida uu korneelku ka helayo dadweynaha Soomaaliyeed.